Toro-lalana ho an'ny fankazalana - Lemur Conservation Network
You are here: Home › Toro-lalana ho an’ny fankazalana
Maro ireo fikambanan-dehibe sy fikambanana miasa amin’ny fiarovana ny tontolo iainana no manantanteraka hetsika isan-karazany ho fankalazana ny andron’ny varika maneran-tany na ny dihin’ny varika maneran-tany. Izany dia tanterahin’izy ireo any amin’ny toerana izay hiasany sy misy ireo tetikasa manerana ny nosy.
Maro amin’ireo mpikambana ato amin’ny LCN no mankalaza ny andron’ny varika maneran-tany.
Indro misy toro-lalana vitsivitsy omenay ho an’ireo fikambanana na olon-tsotra maniry hanantanteraka hetsika ho an’ny andron’ny varika maneran-tany.
Manentana ny olona tsirairay izahay hankalazana ny andron’ny varika maneran-tany any amin’ny toerana misy azy ka hanampy betsaka azy ity toro-lalana ity.
Fanentanana sy hetsika fanabeazana
Maro ireo fanentanana afaka tanterahina mandritra ny fankalazana ny dihin’ny varika maneran-tany.
Mikajy Natiora mandritra ny lalao miaraka amin’ny ankizy
Manaova fanentanana ho an’ny mponina eny amin’ny fahi-bibi dia na park iasanao.
Manaova famelaram-belaran-kevitra na kaoferansa na laombary an-dasy eny amin’ny Oniversite na ivo-toeram-pikarohana. Raha mpikaroka ianao dia fotoana indrindra hizarana fahalalana ny fankalazana
Manaova fanentanana sy hetsika fanabeazana momba ny varika ho an’ny ankizy an-tsekoly.
Ireo loharano azo ampiasaina
Maro ireo loharano azo ampiasaina entina hanentanana mandritra ny fankalazana. Misy loharano vitsy ato amin’ny LCN izay azo ampiasaina toy ny boky na horonan-tsary amin’ny teny Anglisy na teny Malagasy.
Tsidio ihany koa ny bilaogy momba ny dihin’ny varika maneran-tany anananao hevitra amin’izay afaka tanterahina hafa ao anatin’ny hetsika fanentanana.
Hetsika any amin’ny toerana samihafa
Maro ny toerana azo hanantanterahina ny fankalazana na an-kalamanjana na an-toerana hanaovana lanonana maro.
Ny fankalazana dia azo atao amin’ny alalàn’ny fety isan-karazany toy ny hira sy dihy. Ny kilalao maro isan-karazany na ny lalao ara-panantanjahan-tena ho an’ny ankizy sy tanora dia manintona sy mahasarika azy ireo handray anjara amin’ny fankalazana ny dihin’ny varika maneran-tany.
fankalazana ny dihin’ny varika maneran-tany 2018 tao Antananarivo
Ireo fifaninana isan-karazany na kilalao an-tsaina atao hoe “Lemur Trivial” dia anisan’ny mampazoto manokana ny ankizy sy mpianatra ihany koa.
Endrika fandrahavahana ny fety
Manaova “costumes” na “masques” manokana miendrika varika entina andravahana sy hanintonana ireo mpijery mandalo sy ireo mpandray anjara mandritra ny hetsika toy ny filaharam-be na Carnaval (Mianara manambaotra izany eto: https://www.youtube.com/watch?v=1vFCvYA2L84)
Ampahafantaro sy Ahelezo ny hetsika atao
Ampahafantaro eny amin’ny tambazotra sosialy sy ny tranon-kala ny hetsika
Mandefasa fanasana amin’ny alalàn’ny peta-drindrina na amin’ny mailaka
Manorata bilaogy manokana eo amin’ny tranon-kala momba ny hetsika
Mifandraisa aminay ka omeo ny daty sy ny toerana hanaovana ny hetsika ka ho ampidirina ao amin’ny Alimanakan’ny hetsika 2019 izany.
T-shirts natokana ho an’ny fankalazana ny dihin’ny varika maneran-tany
Ny T-shirts izay hamidy eto amin’ny LCN dia tsy mbola hamidy eto Madagasikara fa natokana ho an’ireo fikambanana na olona any ivelany maniry indrindra hanohana ireo tetikasa momba ny varika amin’ny alalàn’ny fividianana T-shirts.
T-shirt natokana ho an ny fankalazana ny dihin’ny varika maneran-tany 2015
Azo atao tanteraka anefa ny mampiasa ny logo na ny sary rehetra natao ho an’ny fankalazana ny dihin’ny varika maneran-tany. Misy logo izay amboarina isan-taona.
Ampiasao manokana ny tambazotra sosialy ho fampielezana ny hetsika
Manokàna herinandro ho an’ny fankalazana ny dihin’ny varika maneran-tany eo amin’ny pejy Facebook na Twitter. Mandritra izany dia manaova “post” manokana ho fizarana sarin’ny varika, fanentanana, fizarana fahalalana, fampahafantarana ny fikambanana sy ny hetsika atao.
Mampiasa hashtags #WorldLemurDay na #WorldLemurFestival na #AndronyVarikaManeranTany na #DihinyVarikaManeranTany